Ukuphupha malunga nemodeli ▷ ➡ Discover Online ▷ ➡️
Ukuphupha ngomzekelo. Ukuba uyazibuza, singawahlalutya amaphupha ethu, impendulo ithi, ewe, kodwa ungaze uwathathe ngokoqobo: kuba zizele ziimpawu, esi sikhokelo siza kukunceda utolike amaphupha.
Kuxhomekeke kwinjongo yazo, iitemplate zinokwenziwa ngezinto ezahlukeneyo, umzekelo, iplastikhi, ukhuni, veneer, ilaphu okanye ikhadibhodi. Injongo esisiseko ihlala ifana. Kuba ngetemplate yokusika, izinto zoyilo olufanayo kufuneka zenziwe okanye zilungiswe.
Ngengqondo yokomfuziselo, igama elithi "itemplate" linokusetyenziswa njengelinye igama leskim okanye umthetho, kodwa kunye nentsingiselo. Igama "itemplate" lichaza ukucinga nokwenza kwiindlela esele zenziwe okanye kwiindlela zokuziphatha.
Kodwa nguwuphi umyalezo ophethe "itemplate" njengomqondiso wephupha? Ngaba lo mxholo wamaphupha ufuna ukutsala umdla?
1 Uphawu lwephupha «itemplate» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «itemplate» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «itemplate» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «itemplate» - ukutolikwa ngokubanzi
Ngokubanzi, "itemplate" yomfanekiso wephupha unokubonisa ukuba umphuphi ungqongqo ebomini bakhe kwaye ulandela a ulungelelwano. Ukwahlula abantu ngokwamacandelo kwaye ulungiselele indlela ethile yokuziphatha kwakhe, ngokokusebenza kwakhe.
Kwelinye icala, kuya kufuneka uyazi le ndlela uziphatha ngayo ngephupha lakho. Kwelinye icala, elo phupha likwanesilumkiso sokuba le ndlela ayizukunceda nganto umphuphi ekuhambeni kwexesha. Kungenxa yokuba ngokwenza oko, uzenza abe nekhethe.
Nabani na ozoba iipateni ngepensile kwiphupha lakhe uya kuba nokuninzi izimvo entlokweni yakhe yobomi ngokoluhlalutyo lokulala ngokubanzi. Luhlobo luni lwepateni ekufanele ukuba ithathelwe ingqalelo. Iipateni zokujonga amaphupha zihlala zibonisa ukungazinzi ngaphakathi kunye nokungalingani. Iipateni zemigca emide ephupheni ibonakalisa uxinzelelo lobomi, iipateni ezinqamlezileyo zibonisa ukuzola kunye nemvisiswano. Iipateni zetemplate zejiyometri njengomfanekiso wephupha zinokujolisa kwindlela yokucinga yokulala.
Kananjalo kubalulekile ukuba utoliko ngokubanzi lwento epeyintiweyo ephupheni. Ngaba umzobo wawusephepheni okanye ngelaphu? Okanye ngaba usebenzise ukupenda iphethini yehena kulusu? Imiba yesimboli yamaphupha efanelekileyo inokunceda apha.
Uphawu lwephupha «itemplate» - ukutolikwa kwengqondo
Ukutolikwa kwengqondo kwephupha leetemplate ngumqondiso kulowo uleleyo ukuba akafuni kunyanzelwa ngendlela ethile. Ukwenzela yena yenza ngokukhululeka es ibalulekile kwaye awufuni kubambeka kwigridi ethile. Ufuna kwakhona ukulahla ii-clichés ezithile.
Ukuba iphupha lisebenzisa itemplate ukulungiselela isampulu okanye imodeli ngelixa uleleyo, uya kufumana isalathiso sento eyomeleleyo ngoku. Umntu kufuneka aqwalasele ukuba yeyiphi ikopi okanye replica ephupheni. Ukusuka koku, unokufikelela kwizigqibo ezininzi kumyalezo wephupha.
Ukuba abantwana bapeyinta ephupheni ngeepensile, oku kungafuzisela izimvo zenkwenkwe ezazilele.
Ukuba wenza into ebubuxoki okanye yokulinganisa into ephupheni ngesitensile, oko kubonisa ukuba uyiyo uyaxoka. Umntu ekuthethwa ngaye usenokuzenza into angeyiyo kwaphela.
Ukulungiselela itemplate kwabanye njengomfanekiso wephupha kunokubonisa ukuba umntu oleleyo ufuna ukoyikisa abanye ngombono wakhe.
Uphawu lwephupha «itemplate» - ukutolika kokomoya
Isimboli yephupha "itemplate" inokuthi, ngokwembono yokomoya, ibonise ukuba unomoya wasimahla kwaye awufuni kulinganiselwa.
Ke ngoko, kuyacetyiswa ukuba umphuphi abone amandla ekhono lakhe.